Ifekthri Yobunjiniyela Nokudizayina, Abahlinzeki - Abakhi base-China Bonjiniyela Nokudizayina
Ukugcinwa Kwesikhunta Sepulasitiki
ukugcinwa kwesikhunta sepulasitiki Ukugcinwa kwesikhunta kubaluleke kakhulu kunokulungisa isikhunta. Izikhathi eziningi zokulondolozwa kwesikhunta, impilo yaso iba mfushane.Uma isikhunta sigcinwa kangcono, impilo yaso yesevisi izoba yinde.Ukugcinwa kwesikhunta kuhlukaniswe kakhulu ngamaphuzu amathathu; 1.Ukugcinwa kwesikhunta nsuku zonke: zonke izinhlobo…
Abahlinzeki bokwenza isikhunta
Singomunye wemikhiqizo yepulasitiki echwepheshile ekhiqizayo & nokwenza isikhunta suppliers.We ngokukhethekile ekukhiqizeni zonke izinhlobo zokukhiqizwa kwepulasitiki, futhi sihlinzeka ngokuklama isikhunta, ukwenza isevisi. Sikulo mugqa eminyakeni eyi-15, ingakusiza ukuthi uklame futhi uthuthukise imikhiqizo yakho emisha,…
Umjovo Mold Mold Design
I-JS MOLD Mold ineqembu elicebile elinolwazi lokubumba amathuluzi okubumba—elikwaziyo ukunciphisa izindleko ezihilelekile ekwakhiweni kwamathuluzi nenqubo yokukhiqiza kuyilapho likhiqiza izingxenye zekhwalithi ephezulu—kungasho umehluko phakathi kwempumelelo nokwehluleka kwephrojekthi yakho. I-JS MOLD Mold iyimboni...
Isikhunta sePlastiki Esinembayo Esinembile
I-JS MOLD Mold ihlinzeka ngezinsizakalo zokwenza isikhunta sepulasitiki esinembayo ngokwezifiso, uhlelo lwethu lokwenza umjovo luyinqubo yobunikazi egxile ekuzuzeni impumelelo enkulu kuzo zonke izigaba zokuklama isikhunta, ukuhlaziya, ukukhiqiza, ukuzama, kanye nokukhiqizwa kokubumba umjovo okwenziwa ithimba elinolwazi olucebile. usebenzisa...